Isikhokelo sakho sokuKhenketho saseKholeji Ngaba ngokuqhelekileyo ungumfundi ngeNgcaciso-Ngcaciso yokuQala
Xa u tyelela ikholeji, qiniseka ukuba ubuze imibuzo efanelekileyo xa uthatha uhambo lwekampus. Kwakhona uzame ukugcina abazali bakho abanomdla ngokukhawuleza baze babuze imibuzo. Akukho mnye obalaseleyo kwikhokelo lokutyelela ukuba abe neqela kunomntu onomdla, ngakumbi umfundi onobuchule. Kukholisa ukuba nomntu owenza ulwazi kunye nokubuza imibuzo. Kungcono nokuba loo mntu ungumfundi - oko kukuthi, omnye wabantu isikhokelo sokutyelela uzama ukufikelela.
Ngoko ngokuzayo, qalisa umbuzo ukuze abazali bakho bangayi. Nemibuzo emihlanu enokuthi ivelise incoko enkulu enkampu yakho yekampus.
Buza ukuba kutheni bakhetha isikolo sabo.
Izikhokelo zee-Campus tours azizange zifumane izikhundla zabo ngokuzizwa zilukhuni ngamava ekholeji, ngoko ngoku unethuba lokufumana isizathu sokuba babekho kwaye bahlala bevuya malunga nesikolo. Kutheni banqwenela ukubhalisa kwindawo yokuqala? Ngaba bayayitshintsha loo mpendulo ngoku bafumene imbono yengqondo?
Ngokukodwa xa usondela ngakumbi ekubeni wenze isigqibo sekholeji ngokwakho, kunceda kakhulu ukuva malunga nemibandela ekhuthaza abanye abantu ababenokwenza iikholeji zabo; ukufumanisa ukuba bayakutshintsha impendulo yabo ngoku, njengomfundi wangoku, unokuba yindlu efanelekileyo ngokwenene kwisikolo senkcubeko. Ngaba isikhokelo sakho sokutyelela sifike kwinkqubo yefilimu kwaye sihlala kwiikholeji? Ngaba bavuyiswa yimoya yezemfundo kwaye ngoku bayaqonda ukuba indawo leyo inkulu kakhulu? Ziziphi izinto eziphambili kwiikholeji zokukhetha xa kuthelekiswa nezo zikhokelo zakho?
Buza malunga neklinikhi yabo.
Unokuqiqa into ethile malunga noluntu oluqhelekileyo lwasekukholeji luvela kubemi besikolo, ubungakanani bekampus, indawo, kunye nokusebenzisana kwakho okuzibonayo xa uhambahamba (abantu abaninzi, iikhampasi ezinkulu kunye nabanye abantu basezidolophini yonke into ithambekele ekuzaliseni abantu abahlala ngaphantsi koluntu). Uhambo lwakho luyithuba lakho lokuqinisekisa okanye ukuphikisa ukuveliswa kwakho, nokucinga malunga naluphi uhlobo loluntu olufunayo kwikholejini. Amancinane kunye ahlangeneyo? Okukhulu, kunye nokuhlala rhoqo ukuhlangana nabantu abatsha?
Xa ucela uhambo lwakho lukhokele oko kukho indawo yasekholeji ifana nayo, khumbula ukuba impendulo awasinikayo iya kusekelwe kumava ekholejini yakhe . Iikhampasi zihlala zineendlela ezahlukeneyo zokwakha amaqela omhlobo - iiklabhu, iigrama zemfundo, iihholo zokuhlala, imisebenzi yokufunda, umzekelo-kwaye kuninzi, isikhokelo sakho sokutyelela siya kusebenzisa ezimbalwa zale ndlela ukuphuhlisa isondo kwaye uya kuthetha ngovuyo ngabo. Kodwa musa ukuthatha impendulo yakho njengendlela enye yokufumana ubomi obonwabileyo kwi-campus oya kutyelela.
Buza ukuba benze ntoni ukuzonwabisa.
Ngokuqhelekileyo izikhokelo zokutyelela ziya kuzama ukukubonisa ngemisebenzi eyahlukeneyo yexesha lokuzonwabisa-funyanwa kwi-campus xa ubuza lo mbuzo, ngoko yindlela efanelekileyo yokufumana amathuba. Qaphela, nangona kunjalo: impendulo yesikhokelo sokutyelela iya kuxhomekeka kwi-campus yabo kwaye inokwenzeka ukuba iya kubhekiswa kwinto yokuba uhambo luquka abazali. Ingcinga efanelekileyo yokuncedisa nayiphi na impendulo oyifumanayo kwikhokelo yakho yokutyelela malunga nesimo senhlalakahle ngokufunda iibhodi zeendaba zoluntu malunga nekampus kunye nokuthetha nabanye abafundi ngelixa uhlala kwikampus . Unokujonga kwakhona kwiwebhusayithi yekholeji yokufikelela kwiiwebhusayithi zeziko lezemfundo, ii-akhawunti zekholeji zentlalo yoluntu, kunye neeblogi zabafundi (ii-ofisi ezininzi ezivakalisiweyo zicela abafundi ukuba babelane nabo) ukuze bafumane ingqalelo ebanzi yintoni abafundi abayenzayo ukuze baphumule. Ukuba awukwanelisekanga, ukwenza uhambo lokuhamba ngokukhawuleza kunye nomfundi wangoku i window epheleleyo kwiinkcubeko zekampus. Nakhu okumele ulindele ukuba uhlale ubusuku .
Qaphela: ukuba ufuna ukucela uhambo lwakho ukukhokela oko baziyo malunga neqela elithile okanye iqela kwi-campus enomdla kuyo, yenza-kodwa kungekhona kwimeko yolu tyelelo, ngakumbi ukuba lukhulu. Izikhokelo ziphantsi kwengcinezelo yokunikezela ngoluhlu olufanelekileyo lweenkcukacha ngokugqithiseleyo (ngokuqhelekileyo ngeyure enye) kunye nelokuba zibandakanya wonke umntu ekutyekisweni ngelixa lenza. Lindela ukukhawuleza kwirebe okanye emva kokuba sele iphelile ukubuza yonke imibuzo yakho.
Buza ukuba uhlala phi kwikampus kufana nomntu omtsha.
Uninzi lwezikhenkethi zibandakanya ukutyelela kwigumbi lokulala, elixesha elide lokubuza imibuzo malunga ne-ins kunye nokuphuma kwenkqubo yezindlu kwikholeji. Indawo ohlala kuyo kwaye ohlala kuyo unokuba nefuthe elingakumbi kwiimeko zokuqala utshintsho lobomi bekholeji. Kubalulekile ukuba abafundi base-freshman babe neendleko ezihlukeneyo okanye ukuba bahlala phantsi kweholo ukusuka kuma-classroom, ngokukodwa xa ufunyanwa ngumfundi ekhangele ukwenza isigqibo malunga neminyaka emine yobomi bakho, imeko yezindlu ingabalulekanga qwa lasela. Uya kufuna ukwazi ukuba uya kuba nomntu ohlala naye kunye nendlela oya kufana ngayo; uya kufuna ukwazi apho iindawo ezintsha zendawo yokuhlala kwi-campus, ukuba iikholejini inezindlu zentsha; kwaye uya kufuna ukwazi ukuba izakhiwo zenkxaso kunye nezenkxaso ziyiiholo zokuhlala.
Ukuba ucinga ngokugqithiseleyo ikholeji okanye umfundi ovunyelweyo, kunokukunceda kakhulu ukucela ukhokelo lwakho lokutyelela malunga neenkonti kunye nama-bolts ekuhambeni okokuqala. Yayiyintoni into efana nayo? Ingaba ngaba baqhelanise ngempumelelo abafundi abatsha? Yintoni ayenakho ukulibala ukuzisa oko kubalulekile?
Buza kubo malunga nobudlelwane babo kunye nabafundisi be-classmates.
Inkcubeko yezemfundo iya kuba yinto ebalulekileyo kwikholeji yakho; luquka iindidi ezinxibelelwano ozenzileyo kunye nabaprofesa kunye nokuba zeziphi iintlobo zokusebenzisana oza kuba nazo nabafundi bakho eklasini, kunye nezinto ezilindelekileyo kwiikholeji ezikuyo njengomfundi (ezinye izikolo zinemigaqo ehloniphekileyo yezifundo ukubonisa ugxininiso lwekolishi ekunyanisekeni kwezemfundo - kwaye ngokuphindaphindiweyo kuya kukuvumela ukuba uthathe iimviwo ezingazange zithengwe okanye uzise izabelo zasekhaya ukuba zizaliswe ngokholo oluhle).
Ufuna ukufumanisa, umzekelo, ukuba ngaba ootitshala bavame ukuzenza bazifumaneke kubafundi besikolo esiphantsi kwee-grade-grade okanye abanomdla ngaphezu kwezinto ezifundiswayo, okanye ukuba uya kuthatha imibuzo yakho ekufundiseni abancedisi. Kwakhona kunceda ukwazi ukuba abafundi bajonga njani eklasini. Ngaba bayakhuphisana okanye banokubambisana? Ngaba abafundi babandakanyeka kakuhle kwiingxoxo zeklasi kunye neeprojekthi zeqela, okanye ngaba ukufunda ngokuzimeleyo kaninzi? Izimpendulo zale mibuzo zidla ngokutshintsha ukusuka kwisebe ukuya kwisebe nakwimfundi ukuya kumfundi, ngoko ufuna ukufumana ulwazi olongezelelweyo malunga nomoya kwiintsimi zakho. Isikhokelo sakho sokutyelela sinokukunika uluvo oluqhelekileyo lwesiko lezemfundo zesikolo; ukufumana ezinye iinkcukacha, kukulungele ukuthetha nabafundisi kunye nokutyelela iklasi .
Isikhokelo esiphezulu ekukhetheni iKholeji:
Iziganeko zeKholeji epheleleyo
Iiprofayile zeKholeji A - Z
Imvelaphi yeMbali kwi "Les Miserables"